Maalinta: Oktoobar 30, 2019
Waxaa lagu dhawaaqay in Sabiha Gökçen Tavşantepe Metro Line, oo si aad ah loo saadaalinayo, loo adeegsan doono 2020. Qadka metrooga M4 Kadıköy-Tavşantepe waxaa laga go'doomi doonaa garoonka diyaaradaha Sabşa Gökçen kadib Tavşantepe [More ...]
Wasaaradda Wershadaha iyo Teknolojiyadda ayaa ka codsatay shirkadda Eskişehir macluumaad culus oo ku saabsan mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare. Laga soo bilaabo Wasaaradda, Eskişehir Rugta Wershadaha ee laxiriirta awoodda mashruuca YHT, wax soo saarka ama maalgashiga iyo wax soo saarka ee arrintan la xiriira [More ...]
ORBEL A.Ş., oo ah shirkad laga leeyahay degmada Ordu Metropolitan Municipal, waxay u ololeyneysay khidmadaha isticmaalka Boztepe Cable Car, Reverse House iyo Boztepe Adventure Park. Ujeedada koorsadan ayaa ah in ardayda la siiyo aragtiyo kaladuwan [More ...]
Ibrahim Burkay, Gudoomiyaha Bursa Rugta Ganacsiga iyo Wershadaha (BTSO), wuxuu cadeeyay in mugga dhoofinta Bursa ay korodhay iyada oo lagu taageerayo Mashaariicda Caalamiga ah ee Tartanka Tartanka (UR-GE) ee lagu sameeyay hogaaminta BTSO. [More ...]
Gawaarida naafada ah ee Ankara waxaa lagu sameeyay si waafaqsan heerarka adduunka
Dawlada hoose ee magaalada Ankara waxay gogol dhaaf ka dhigaysaa wadooyinka, isbaarooyinka iyo isgoysyada dadka lugeynaya iyada oo la raacayo heerarka adduunka si maal-gashadayaasha ay uga faa'iideystaan ​​nolosha magaalada si isku mid ah. Dowladda Hoose ee Magaalada, waaxda Sayniska iyo Injineerinka [More ...]
Duqa Degmooyinka Magaalada Mersin Vahap Seçer oo sheegay inuu sameyn doono takoor wanaagsan dumarka mar kasta, wuxuu yaqiinsaday yaboohaan dhaqankiisa. Haweenku cod bay ku leeyihiin gaadiidka dadweynaha ee Mersin. Dhawaan baabuur [More ...]